Waa maxay SEO wanaagsan? Waa kan Daraasad Kiis | Martech Zone
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, waan soo maray ahaa arrin cod ku saabsan inta la taliyeyaal iyo wakaalado ah ee ku jira warshadaha raadinta dabiiciga ah ay diidaan inay beddelaan. Waa nasiib daro maadaama ay sii wadaan inay ka baxaan raadadkii macaamiisha ee maalgashaday wax badan laakiin dhab ahaantii baabbi'iyey awooddooda si ay u helaan awood dabiici ah, darajo, iyo taraafikada.
SEO wanaagsan: Daraasad Xaalad ah
Waxyaabaha soo socdaa ayaa ah shaxda mid ka mid ah macaamiishayada ugu dambeeyay 'keyword keyword over time over using isticmaalaya Xeebaha:
A - Kani waa daahfurka websaydhka macmiilka ee wakaaladii hore. Waxay ahayd magac cusub oo aan maamul lahayn.
B - Muddo aan koritaan lahayn ka dib, hay'addu waxay go'aansatay inay bilawdo istiraatiijiyad duugowday oo ah abuurista degmooyin fara badan, otomatikada dadweynaha tobanaan ka mid ah bogagga muhiimka ah ee keyword-ka hodanka ku ah, iyo dib-u-dhac xoog leh.
C - Goobtu waxay si aad ah sare ugu kacday qiimeynta iyo isu socodka dadka; si kastaba ha noqotee, waqti dheer kuma qaadan algorithms-ka Google si ay u tirtirto nidaamka dib-u-celinta iyo dib ugu soo celiso goobta maamulkeedii hore.
D - Hay'adda waa la ceyriyay waxaana loo shaqaaleeyay si aan ula wareegno goobta iyo darajada baaritaanka dabiiciga. Lixda bilood ee soo socota, dib ayaan u dhisnay goobta, dib ayaan u laalnay backlinks sun ah, waxaan u wareejinay dhammaan bogagga hal degmo, waxaan u weecinnay bogagga muhiimka ah ee muhiimka ah bartamaha, bogagga mowduuca keliya, waxaan soo saarnay waxyaabo qani ku ah, iyo sawir muuqaal ah. Waan eryanay eber backlinking oo aan lahayn dalacsiin lacag bixin ah wax alla wixii. Midna Nada.
E - Natiijooyinka waxay sii wadaan wadista wadaagga, kaqeybgalka, iyo beddelaadda. Xilliga ugu sarreysa ee wareegyada u dhexeeya sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan, kal-fadhiyada ayaa kor u kacaya 210%, isticmaaleyaasha ayaa kor u kacaya 291%, aragtiyada bogga ayaa kor u kacaya 165%, heerka soo-kabashada ayaa hoos u dhacaya 16%, kal-fadhiyada cusubi waa 32%, booqdayaasha soo laabanaya ayaa kor u kacaya 322% . Macmiilkan qaaska ah wuxuu adeegsadaa wicitaanada taleefanka ee ganacsiga, sidaa darteed ma hayno xogta saxda ah ee ka baxsan sahannada wicitaanka halkaasoo lagu weydiinayo sida lagu helay. Google wuxuu sii wadaa hogaaminta wadada.
Waxaan sii wadaa inaan u digo shirkadaha kireysta la taliyayaasha raadinta ee aan waligood baarin dhagaystayaasha, tartanka, ama dhaqankooda goobta. Dib-u-xirid la'aanta iyada oo aan la soo saarin wax ku habboon, qiimo leh, oo si heer sare ah loo habeeyay warbaahinta dhijitaalka ah ayaa dhibaato kugu gelin doonta. Waxaan sii wadeynaa inaan ku kaxeyno macaamiisheena natiijooyinka dabiiciga ah adoo adeegsanaya shaqeeyey maamul halkii xujo taasi waa la maareynayaa ama waa la bixiyaa.
Barashada qotoda dheer iyo sirdoonka macmalka ah ayaa sii wadaya Google algorithm-ka 'Rankbrain algorithm'. Larry Kim xusay:
Google way sii wadi doontaa baaritaanka boggaaga su'aalaha ku habboon… in muddo ah. Laakiin haddii ay ku guuldareysato inay soo jiidato kaqeybgal, waxay sii wadi doontaa inay u dhinto geeri gaabis ah. Waxay lumin kartaa 3 boqolkiiba taraafikada bishii - aad ayey u yartahay xitaa ma ogaanaysid illaa goor dambe. Ugu dambeyntiina, boggaaga ayaa si fudud uga dhici doona muranka darajada.
Ilaa ay goori goor tahay.
Istaraatijiyadaha baaritaanka dabiiciga ee maanta uma baahna la taliyayaal goobitaan ee shalay. Istaraatijiyadaha raadinta dabiiciga ah ee maanta waxay u baahan tahay sumcad weyn iyo suuqgeeyayaal nuxur leh oo fahmaya sida loo baaro loona jaangooyo dadaalkaaga dijitaalka ah ee dhagaystayaashaada ka dibna iyaga loo siiyo waddooyin si fiican loogu beddelo.
Haddii la-taliyahaaga raadinta dabiici ah uusan si joogto ah u baarin, ku siinaynin talo ku saabsan xeeladahaaga mawduucyada, iyo hagaajinta boggaaga, waa waqtigii la raadin lahaa lammaane raadinta dabiici ah oo cusub. Xaqiiqdii, waxaan jeclaan lahayn inaan caawinno - gaar ahaan haddii aad tahay daabacaad aad u ballaaran. Khibradayada halkaas ayaan ku lahayn warshadaha.
Tags: xun xunwanaagsan seodarajo keywordraadinta dabiiciga ahraadinta organic fadhiyo cusubeegista bogga raadinta dabiiciga ahfadhiyada raadinta dabiiciga ahisticmaalayaasha raadinta dabiiciga ahdarajeeyosemrushmaxaa fiican seo
Waxaad u badan tahay inaad Waqti Dheeraad ah ku Maamusho Xogta Ka Badan Suuqgeynta